Joyina i-SHL-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Ikhaya>UKUXHUMANA SHL>Joyina i-SHL
Isikhundla umnyango Imfundo Inombolo Isikhathi sokukhishwa
Ukuthengisa okwaphesheya Iminyango Yezentengiso Iziqu zeBachelor noma ngaphezulu 3-5 2020-04-09
1. Ukuthuthukiswa kwebhizinisi: kususelwa kwinzuzo yenkampani ngamanani entengo kanye nezinsizakusebenza ezahlukahlukene, ngokuxhumana nangendlela ephumelelayo futhi ukuxhumana ngempumelelo nama-ejenti aphesheya kanye namakhasimende asekhaya, ngokwesu lebhizinisi lenkampani, ukufezekisa izinhloso zebhizinisi ezisunguliwe;
2. Ukuhlinzekelwa kwamakhasimende: ngokwezidingo zama-ejenti aphesheya kwezilwandle namakhasimende, ukuxhumanisa nokuhlela umsebenzi weminyango efanelekile njengendawo yokubhuka, ukusebenza, amadokhumenti, ezezimali, njll., Qinisekisa ikhwalithi yensiza yesixhumanisi ngasinye, ukuhlangabezana nezidingo zama-ejenti namakhasimende, futhi aphathe kahle zonke izinhlobo zezikhalazo neziphakamiso;
3. Ukungena kwesistimu: ukufaka okufika ngesikhathi nangendlela efanele zonke izinhlobo zedatha njengoba kudingeka, ukubuyekeza okufika ngesikhathi, ukuhambisa nokuhlaziya zonke izinhlobo zezitatimende zebhizinisi nedatha ehlobene nesikhathi;
4. Ukubambisana kwamabhizinisi: sisize eminye iminyango efanele ukuxhumana nabamele phesheya, futhi iqinisekise ukuthi eminye iminyango yamabhizinisi isebenzisa ngokugcwele inethiwekhi ye-ejenti yaphesheya nezinsizakusebenza zokuthuthukisa amabhizinisi ahlobene nawo;
5. Ukuthuthuka kwebhizinisi: gcina ukuxhumana okuhle nezivakashi, ukwazi ukubamba izidingo eziningi zezimenywa zezimenywa ezifika ngesikhathi, futhi unikeze ngebhizinisi elingaba khona emnyangweni nakwiminyango yebhizinisi ehlobene nayo.
1. Isipiliyoni seminyaka engaphezu kwemibili kule mboni, kufaka phakathi isipiliyoni seminyaka engu-2 ekusebenzeni kwemithwalo ebekiwe, ujwayelene nemodi yokusebenza kwemithwalo eqokiwe, ukumelana ngokuqinile nengcindezi
2. I-CET 4 noma ngaphezulu, ekwazi ukusebenzisa isiNgisi njengolimi olusebenzayo, olukwazi ukulalela, ukukhuluma, ukufunda nokubhala.
3. Unesibindi, uzimisele ukuxhumana, uzimisele ukutadisha kanzima, unesipiliyoni esithile sokuthengisa nomoya onamandla wokuqina.
4. Ukujwayelana nokukhangisa nokukhuthaza i-facebook, i-twitter, i-youtube nezinye izingosi zokuxhumana zenhlalo ezisezingeni eliphezulu ukukhulisa isibalo sabalandeli
5. Bhekana nemibiko efanele yokuthengisa kanye nokuhlaziywa kwedatha
Yamukela kabusha i-imeyili: [Email protected]
Ukusebenza ngaphesheya kwezilwandle Umnyango Wezokusebenza Iziqu zeBachelor noma ngaphezulu 3-5 2020-04-09
Izibopho zokusebenza ngaphesheya:
1. Ukwakhiwa kwewebhusayithi, kubandakanya ukuklanywa kwewebhusayithi, ukukhiqizwa kwewebhusayithi, ukusebenza kwewebhusayithi, okubandakanya ukwakhiwa kwezithombe, ukubhala umbhalo, ukuhlelwa kwendatshana, njll
2. Ukusebenziseka kwesimo semvelo kweGoogle, amasayithi amaningi amagama angukhiye amaningi i-Google ne-bing ne-yahoo kanye nezinye isikhundla sekhasi lasekhaya le-injini yokusesha,
3. Ukuhlaziywa kwe-SEM nokukhokhwa kwe-SEM kwaGoogle okukhokhelwe, ukulawulwa kwamanani, ukulawulwa kwengozi, ukulawulwa kwamagama asemqoka, ukulawulwa kwezithameli, njll., Ukuthola ukuthintana kwamakhasimende okufanelekile.
4. Inomthwalo wemfanelo wokusebenza nokulondolozwa kwemithombo yezokuxhumana yenkampani yaphesheya kwezilwandle, njenge-facebook, i-imeyili, i-twitter, i-youtube, njll., Kanye nokwenza ngcono ukuqonda komkhiqizo kanye nesithombe somkhiqizo wama-akhawunti asemthethweni wezindaba zezenhlalo ngokusebenzisa izindlela ezisebenzayo.
5. Iqhaza ekuhlelweni kwezokuxhumana kwezindaba njalo ngenyanga, kufaka phakathi kepha kungagcini lapho: ukuhlela ukuxhumana kwe-Angle, ukubhala ikhophi yesiNgisi, uchaze abezindaba abakhululiwe, njll.
6. Vuselela futhi uphathe okuqukethwe kwewebhusayithi esemthethweni yenkampani.
7. Ukuqapha inethiwekhi ebanzi nokubikwa kwemicimbi enkulu yenhlekelele.
8. Ukuxhaswa Ngemuva kokuthengisa kwebhizinisi laphesheya.
1. Iziqu zeBachelor noma ngaphezulu, ezinkulu ngesiNgisi, ubuntatheli, ubudlelwane bomphakathi, ukukhangisa, ukumaketha noma okuhlobene.
2. Ukwazi isiNgisi nokuhunyushwa ngokubhala, ngokushelelayo ekukhulumeni ngomlomo.
3. Ukwazi ukusebenzisa isoftware yasehhovisi.
4. Kuhle ekukhulumisaneni kwamasiko namasiko nasekuxhumaneni nomnyango ophakeme.
5. Amakhono okubhala amnandi kakhulu esiNgisi.
6. Kunconywa isipiliyoni sokukhuthaza ukuhweba ngamazwe angaphandle isiNgisi, injini yokusesha iGoogle. I-Bing. I-Yandex, imithombo yezokuxhumana fb.
7. Kukhethwa amabhizinisi aphezulu aphesheya kwezilwandle nemisebenzi ehambelana nayo yaphesheya.
Ukudlulisa ukuthengisa Iminyango Yezentengiso I-College degree noma ngaphezulu 3-5 2020-04-09
1. Isikhundla esifanele isikhathi eside.
2. Unomthwalo wemfanelo wokwenza inkampani yenkampani yezasolwandle / yomoya / yesitimela / yezimpahla ezisindayo / yezimpahla ezithwala abantu abaningi;
3. Siza ophakeme ukuphatha futhi ahambise imakethe, alandele umkhondo futhi aqaphe ukuqaliswa kokusebenza kwezinhlelo ezahlukahlukene zokuthengisa;
4. Ukusizwa emisebenzini yokucwaninga kwemakethe yemikhiqizo yenkampani;
5. Unomthwalo wemfanelo wokukhiqiza okuvamile nokwenziwa obala kwezikhangiso zenkampani;
6. Imininingwane eqoqwe yomkhakha ofanayo emakethe, ibambe iqhaza ekuhlelweni kokukhishwa kwemikhiqizo yenkampani, imibukiso neminye imisebenzi.
7. Gcina futhi uthuthukise iziteshi ezintsha zokuthengisa namakhasimende amasha; ahlinzeke ngezixazululo zokulawulwa kwempahla okuzinzile nokwenziwe kahle ngokuya ngezidingo zamakhasimende
1. Kukhethwe iziqu zasekolishi noma ngaphezulu, ezinkulu ekuthengiseni noma ekuphathweni;
2. Kuyaqondana nokwenziwa kwezimali okuqhubekayo kwezimboni zomhlaba jikelele;
3. Ukucabanga okusebenzayo, umoya okhangayo nobuntu obuyinselele;
4. Uthembekile futhi uqotho, uthokozile futhi unomthwalo wemfanelo, uyakwazi ukuxhumana nabanye;
5. Yiba nenhlangano ethile kanye nekhono lokuxhumana, ongathwala futhi aphule ingcindezi yomsebenzi, futhi ube ngumphathi wesikhathi esihle nomshayeli ozisebenzelayo.
Isikhundla sochwepheshe bezokumaketha Umnyango Wezokumaketha I-College degree noma ngaphezulu 3-5 2020-04-09
Izikhundla zokukhokhela ubuchwepheshe bezokumaketha
1. Kwenziwe ucwaningo lwemakethe, waqoqa futhi wahlaziya izindlela zemakethe ezifanele, futhi wanikeza isisekelo sabaholi ukwenza izinqumo;
2. Usize abaholi ekwakhiweni kwezinhlelo zokumaketha nezinhlelo zokuphromotha;
3. Yenza ukufezekiswa ngokohlelo lokukhangisa olubekiwe, futhi ubhekane nokuhlola umphumela wemisebenzi yokuthengisa;
4. Bheka futhi uthinte amakhasimende, urekhode impendulo yawo, futhi uthuthukise uhlelo lokuphromotha ngokusho kwabo;
5. Naka futhi uqonde amandla emakethe, unake imisebenzi yabaqhudelani;
6. Emsebenzini, naka ukulawula isabelomali, futhi usebenzisane namanye amaqembu athintekayo ukukhuthaza imikhiqizo, ukukhuthaza brand nokukhuthaza ukuthengisa;
7. Kwenziwe ngenkuthalo imisebenzi yokuthuthukiswa kwemakethe, futhi kwagcinwa ubudlelwano bamakhasimende ezindaweni ezihlobene;
8. Unomthwalo wemfanelo wokulondolozwa kobudlelwano bemidiya efanelekile ngokuya ngamalungu abaholi;
9. Ngokuya ngesidingo semakethe nemibono yamakhasimende, beka iziphakamiso zokuthuthuka phambili zemikhiqizo yenkampani, izinsizakalo kanye nokuphromotha.
Amandla ochwepheshe bezentengiso
1. Yiba nolwazi olufanele lokumaketha futhi ujwayelane namandla emakethe yemikhiqizo;
2. Amandla okuthuthukiswa kwamabhizinisi aqinile kanye nekhono lobudlelwano bomphakathi;
3. Amakhono okuxhumana okuhle nokuxhumana;
4. Ikhono elihle lokuhlela imakethe;
5. Yiba nokuqonda okujulile kwemakethe kanye nekhono lokuhlaziywa kwemakethe;
6. Umdlali weqembu elihle.
Izimfanelo zochwepheshe wokumaketha
1. Ikholeji yaseKolishi noma ngaphezulu kwezokumaketha;
Yiba nolwazi olufanele lokumaketha futhi ujwayelane namandla emakethe yemikhiqizo yamabhizinisi;
Okungenani iminyaka engu-3.1 yesipiliyoni sokusebenza esisebenzayo;
4. Amandla okuthuthukiswa kwamabhizinisi aqinile kanye nekhono lobudlelwano bomphakathi;
5. Yiba nokuqonda okujulile kwemakethe kanye nekhono lokuhlaziywa kwemakethe.
Umphathi wephrojekthi Umnyango Wezokumaketha I-University degree noma ngaphezulu 1-2 2020-04-09
1. Qonda ukuthambekela kwemakethe, futhi ulwele ukuthola abahlinzeki abahle kakhulu neziteshi zokubhuka zomkhumbi we-ro-ro empumalanga yabanikazi be-miscellaneous yezingxenye ezinhle kakhulu;
2. Thatha umthwalo wemfanelo wokwenza ngcono inzuzo yokuncintisana kwebhizinisi lemakethe; Ukuthwala kwempahla ngobuningi nsuku zonke kanye nokuhanjiswa kwe-ro-ro, ukulandelwa kwe-patchts ngobuningi.
3. Unomthwalo wemfanelo wokwandisa nokukhuthaza ibhizinisi elihlobene nokudla okwenziwe ngobuningi, izingxenye ezinkulu kanye nobunjiniyela bemigwaqo i-One Belt And One Road, futhi kuthuthukiswe futhi kugcinwe inethiwekhi yenkampani yokudla ezitolo ngobuningi;
4. Bahlaziya amaqembu amakhasimende futhi ngokuqhubekayo bawenza kahle ukuze banciphise ubungozi ekusebenzeni.
5. Bhekisisa izinguquko ezimakethe, uxoxisane namakhasimende ngokusebenzisa izinkontileka ezifanele, futhi uthole izinzuzo ezinkulu zenkampani;
6. Ukuxhumana namakhasimende ngeziteshi zocingo neze-Inthanethi, kuqondwe izidingo zamakhasimende, wafuna amathuba okuthengisa futhi wasiza umphathi ukuthi afinyelele izinhloso zeqembu
7. Sisayine iqembu elibusayo futhi usebenzisane kakhulu nomnyango wokusebenza wenkampani ukwenza isivumelwano;
8. Inomthwalo wemfanelo wokuxazulula izindleko kanye nokuqoqwa kohambo;
9. Qedela eminye imisebenzi enikezwe ubuholi ngokuya ngezidingo zenkampani.
1. Iziqu zaseyunivesithi noma ngaphezulu, ezinkulu ekuhanjisweni kwempahla, ukuhambisa, ukuhweba kanye nokuhlinzekelwa kwempahla kukhethwa;
2. Disband jikelele wezimpahla zemikhumbi, jwayela ukuphathwa kobunjiniyela bamanye amazwe kanye nezingxenye ezinkulu zemakethe, ube nesipiliyoni sokumaketha, ube nezinsizakusebenza zebhizinisi ezikhethiwe;
3. Ukujwayelana nemizila yasekhaya neyangaphandle yezimpahla ezithwala abantu abaningi, okwazi ukuqedela umsebenzi ngaphansi kwengcindezi, nomoya omuhle wethimba nomuzwa wokuzibophezela;
Umphathi wezentengiso Iminyango Yezentengiso I-College degree noma ngaphezulu 1-2 2020-04-09
1. Iziqu zasekolishi noma ngaphezulu, ezinkulu kwezokumaketha noma ezihlobene;